विगत एक वर्षदेखि बढी समय भयो चीनको वुहान शहरबाट उत्पत्ति भई कोरोनाभाइरस संसारभरि नै फिजियो। विज्ञान र आधुनिक चिकित्साका धुरन्धर शक्तिशाली देशसहित सारा संसार नै यस सूक्ष्मजीवको आतंक एवं प्रकोपले घरमै थुनिन बाध्य भयो। परम्परागत चिकित्सा प्रणालीदेखि आधुनिकतम ल्याबहरुमा युद्ध स्तरमै यस भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी उपाय खोज्ने दिशामा सक्रिय प्रयास हुन थाले । रेकर्ड समयमै अर्बौं डलरको लगानीले यस ...
काठमाडौँ- एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले झण्डै ७० हजार अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा विगतका वर्षदेखि बाँकी रहेको सबै अनुमतिपत्र छापिसकेर पठाएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा दुई/तीन महिना पहिले छापिएकादेखि दुई/तीन वर्ष पहिले छापिएर आएको अनुमतिपत्र लिन सेवाग्राही आउन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्कीले बताए । विभागले गत वर्ष ठूल...
काठमाडौं । तपाईको किबोर्डमा भएका कि का बारेमा बारेमा तपाईलाई केकति जानकारी छ ? नियमित रुपमा ल्यापटप तथा डेक्सटपमा तपाईले आफनो काम गरिरहनु भएकै छ । तर, तपाईले प्रयोग गर्ने किबोर्डमा रहेका बटनले के काम गर्छ ? तिनीहरुको प्रयोग के कसरी गर्न सकन्छि भन्ने बारेमा तपाईले कत्तिको विचार गर्नुभएको छ ? वा जानकारी लिने प्रयास नै गर्नुभएको छैन ? यदि छैन भने आज हामी तपाईलाई ती बटनको बारेमा जानकारी दिने प्र...
काठमाडौं । मानिसका अनेकन चाहना हुन्छन् । यात्राका क्रममा होस् वा घरमा बस्दा नै किन नहोस् । कानमा एयरफोन राखिरहनुपर्ने, गीत संगीत सुनिरहनुपर्ने । कलेज पढ्न जाने विद्यार्थी हुन् वा कार्यालयमा काम गर्न गएका कर्मचारी नै किन नहुन्, उनीहरुको कानमा सदा सर्वदा एयरफोन नै झुण्डिरहेको हुन्छ । मनोरञ्जन गर्ने भन्दै कानमा नै इयरफोन लगाएर बस्ने प्रचलन हेर्दा स्टाइलिस भएपनि त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव ...
काठमाडौं । सुबिसु एमएएनआरएस (म्यानुअल्ली एग्रिड नर्म्स फर राउटिङ सेक्युरिटी)मा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालको पहिलो आईएसपी बनेको छ । एमएएनआरएस भनेको राउटिङ सिक्युरिटी सम्बन्धी परामर्श दिनको लागि इन्टरनेट सोसाइटीले सुरु गरेको ग्लोबल पहल हो । जसले इन्टरनेट राउटिङमा हुने समस्याहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरी राउटिङ सेक्युरिटी सम्बन्धी सुरक्षित तरिकाले काम गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । एनटीएको साइबर...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोसँगै स्मार्टफोनप्रतिको क्रेज झन् झन् बढ्दै गएको छ । कतिपयका लागि स्माटफोर्न अत्यावश्यक छ भने कतिपयले फेसबुक, टिकट, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्चाल प्रयोग गर्नकै लागि भए पनि स्मार्ट फोन किन्ने गरेका छन् । बजारमा सस्तादेखि महंगासम्मका स्मार्टफोनहरु पाइन्छन् । तपाईंले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार किन्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले स्मार्टफोन किन्नु भनेको पनि च...
सर्च इन्जिन गुगलले चीनसँग सम्बन्धित २५ सय युट्युब च्यानल डिलिट गरेको छ । गुगलको अनुसार चीनसँग सम्बन्धित यी च्यानल भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबमा भ्रामक समाचार फैलाउने कोसिसमा जुटेका थिए । गुगलले यी युट्युब च्यानललाई अप्रिलदेखि जूनको बीचमा आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएको जानकारी दिएको छ । गुगलले त्रैमासिक बुलेटिनमा दियो कारवाहीको जानकारीः गुगलले त्रैमासिक बुलेटिनमा भ्रामक अपरेशनबारे चर्चा गर्दै ...
अचेल मानिसहरु सबै भन्दा बढी मोबाइल र ल्यापटपमा भुल्छन् । इन्टरनेटको विस्तारसँगै मानिसहरुमा यो लत बसेको हो । त्यतिमात्र नभएर उनीहरु मोबाइल तथा ल्यापटमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरुबाट लेखेर तथा भ्वाइसमार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्छन् । यसबाट उनीहरुले क्षणिक आनन्द लिए पनि पर्नसक्ने जोखिमबारे सचेत हुँदैनन् । यसरी पटक-पटक एउटै कुरा धेरै सर्च गर्ने मानिसहरुलाई अनुसन्धान एजेन्सीहरूले मनिटर गरिरहेका ह...
इटहरी । सुनसरीको इटहरीलाई कर्मथलो बनाइ सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशिल पत्रकारहरूको बिकास तथा उनीहरूलाई हौशला प्रदान गर्न र इटहरी क्षेत्रमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई थप शुदृढिकरण सँगै व्यवस्थित बनाउन इटहरी उपमहानगरले सञ्चार नीतिको कार्यक्रमहरू ल्याउने भएको छ । इटहरीमा चाडै आम सञ्चार परिषद गठन गरी पत्रकारहरूको सम्पूर्ण बिवरण राखिने र उनीहरूको प्रवद्र्धकालागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइने उपमहानगरले जनाएको छ ...
भिडियो कुराकानी तथा बैठक गर्नका लागि चर्चित जुम एपले नयाँ केही विशेषता तथा सेवाहरू थप गरेको छ । विशेषगरी जुममार्फत् भएको कुराकानीको गोपनीयतामा प्रश्न उठिरहेका बेला यस एपका सञ्चालकले गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने विषेशता थप गरिएको बताएका छन् । “जुम एपको सवैभन्दा पछिल्लो भर्सन ५.० मा गोपनीयता, सूचनाको सुरक्षा लगायतलाई सुनिश्चित गर्ने विशेषतासहितका सेवाहरू थप गरिएको छ,” अधिकारीहरूले भनेका छन् । त्य...